The Grey Windo Of the Capital Nwere Ihe osise Ndị Mara Mma | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraMgbidi ndị nwere agba nke Isi Obodo na Ihe osise ndị tụrụ agba
11 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Foto, General, Turkey
na agba ntụ nke isi obodo nwere agba na emetụ nke ndị na-ese
Ankara Obodo ukwu Ankara na-acha uhie uhie ndị ji ukwu aga njem ha, àkwà mmiri na mgbidi tọgbọrọ chakoo na isi obodo nke ndị na-ese ihe. Site na oru nke Onye Isi Obodo Mịnịsta Mansur Yavaş mejupụtara, ndị na-ese ihe si n'isi obodo na-abịanye aka na ọrụ ọrụ n'ọtụtụ akụkụ nke obodo Onye na-ese Şenol Karakaya na ndị otu ya nyere Elmadağ Entrance Bridge Underpass, Cinnah Caddesi Kuloğlu Underpass na ndị okenye na Informationlọ Ọrụ Nweta Ndị Ntorobịa na okpuru Ankara na eserese tulip.
Ankara Obodo ukwu Ankara na-acha uhierị ndị na-aga ije na-agafe agafe, àkwà mmiri na mgbidi na-enweghị isi na isi obodo na mpaghara ya na -emekọ ọnụ ma na-enye nkọwa.
Ihe oru ngo a bu site n'aka onye isi obodo ukwu nke obodo Mansur Yavaş ma ndi Ngalaba Urban Aesthetics mejuputara, onwa di ukwu, àkwà mmiri na mgbidi ihe isi awọ; Onye na-eme ihe nkiri Şenol Karakaya na ndị otu ya na-ezute ndị sere.
ỌR CH CHAIRMAN AKA NA-EGO
A na-ekele ndị ọrụ afọ ojuju nke byenol Karakaya na nkwado nke ndị na-ese ihe 7 site n'aka ụmụ amaala.
Şenol Karakaya, onye kwuru na ha chọrọ ịtụte akara obodo ukwu ahụ site na eserese, nyere ozi ndị a banyere ọrụ:
“Obi dị m oke ụtọ iso na-arụ ọrụ a, nke Onye Isi Obodo anyị Maazị Mr. Mansur Yavas bidoro na Nọvemba 2019. Anyị chọrọ inye ndị mmadụ ihe nka, bụrụ obodo ọhụụ ma weta ebe a na-ese ihe n'okporo ámá. Onye isi ala anyị chọkwara ka Ankara kpochapụ mgbidi isi awọ. Maka nzube a, anyị na-ekere òkè na ọrụ a. Site n'itinye usoro ihe osise n'okporo ụzọ, anyị na-ebute ndụ na obodo ma wetara ndị mmadụ ọdịdị na agba n'etiti ụlọ ụlọ. "
Onye na-ese ihe Rabia Karakaya, onye ya na nwunye ya Şenol Karakaya sere ihe ndị isi nke isi obodo ahụ kwuru, sị, "Ebumnuche anyị bụ ka anyị mee ka ndị mmadụ gbakọta ọnụ mgbe ha na-aga na mbara ihu, windo na n'okporo ụzọ. Na-agbakwunye oriri a na-ahụ anya na obodo. Anyị na-ahụta ọrụ a site na uru onye isi ala anyị Mansur Yavas nyere ndị na-ese na omenka. Anyị na-eme ike anyị niile ime Ankara ka ọ bụrụ obodo mara mma site na-agba agba n'okporo ámá ndị isi awọ. ”
SYMBOLS MAKA MAKA AKAPKỌ
Ndị na-ese ihe ahụ gbanwere ntụpọ Elmadağ Entrance Bridge, Kenan Evren Boulevard Underpass, Cinnah Avenue Kuloğlu Pedestrian Underpass na ndị okenye na Centerlọ Ọrụ Nweta Ndị Ntorobịa nọ n'okpuru oriri nke iji anwansi ha; O nwekwara akara nke Isi obodo, dika Ankara Cat, Ankara Cigdem na Ankara White Pigeon na tulip.
N’igosipụta afọ ojuju ya n’ichecha mgbidi ahụ, nwa amaala dị afọ iri isii na atọ aha ya bụ Kalender Akbal kwuru, “amalitela ọrụ kwesịrị Ankara. Anyị na-esite na ọrụ Mansur President nyere ọrụ na art. Anyị bi n'etiti ikpo ihe na anyị na-emepe emepe na agba ndị a. Sultan Akbal kwuru na ọ na-ese ihe dịka ihe ntụrụndụ ma na-adọta uche nke eserese ahụ ka ọ na-agafe ala ala. Ọ bakwara uru ka emee ya maka maka mmebi iwu n'ihi na achọpụtaghị na ihe dị n'okpuru ahụ na-agafe. Ana m ekelekwa Onye isi ala Mansur maka ọnụ ahịa o nyere Ankara na ndị na-ese ihe. ”
Ntụle Obi Ụtọ: A ga - azụta akwa agba chaa chaa (TUDEMSAS)
A na-atụle nkwekọrịta n'elu mgbidi Bursaray
Mara n ’ingzụta :zụta Ihe: yesụcha nke Netịrụ Anụ na Iron a emebi emebi
Onye isi oche BBP Bursa Ünsal: Ahịhịa wuru na mgbidi BURSARAY na…
Nkwupụta Obi Ọjọọ: Ịghasị na Mwube nke Mgbidi okporo ụzọ okporo ụzọ
A na-eji okooko osisi na ebe a na-eme ihe na-egbukepụ mgbidi nke Istanbul
Ihe ngosi mgbasa ozi: Ihe osise nke mgbidi Metro n'etiti Gökdere na Kestel
Istanbul Metro Na-arụ 7 Mgbidi Gburugburu
Mgbidi Ụlọ Ochie Topkapi Na-eche Marmaray nọ na Nsogbu
Nhazi na ákwà mgbochi na Bursa T2 tramway
Oge Prozụta :zụ: Konya-Karaman Line KM: 84 + 500 - 88 + 700 N’agbata Ikuku ikuku
Ojiji njem ụbịa na-eji ụgbọ ala uhie na Uludag
Foto ndị dị na Palandöken
Ebe Palandoken Ski Resort
Akwa nke Njikọta nke Captain Aghọọ ụcha
Cinnah Caddesi Kuloğlu N'okpuru ụkwụ
Uzo eji abanye uzo Elmadağ
Kenan Evren Boulevard anwụ n'okpuru
Oge Ọgbọ Ọhụụ na yagbọ njem Konya
Nkwụsị Tram dị ọcha na Eskişehir
Onye Minista Karaismailoğlu: 'Enwela Mmụba na Fọtụ tiketi NYT'
Metrobuses na isi obodo
China na-ewu puku kilomita kilomita na-aga Beijing
Liftgbọ njem ọha kachasị elu nke Eurasia na-arụ ọrụ na isi obodo Ankara Ankara
Ihe ndi ozo bu isi obodo.
Exchangetụ Ego Ofesi Ọzọ: Ratetụ ụtụ isi na mgbanwe nke mba ọzọ na ọnụahịa ọla edo mụbara site na 2 n'ime puku abụọ ruo 1 pasent! Ga-eji $ 100 kwụọ ụtụ $ 1